Isiokwu n'usoro n'ihi na gị na ngalaba
Tuesday, April 21, 2015 Tuesday, April 21, 2015 Douglas Karr
Igodo nke usoro nyocha azụmaahịa na-aga nke ọma bụ ịghọta isiokwu ndị ọbịa na-achọ iji chọta ụlọ ọrụ gị. Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ụlọ ọrụ m na-agwa okwu na emebeghị nyocha isiokwu ọ bụla.
Nsonaazụ nke ịgaghị eme nyocha na usoro ịre ahịa n'ịntanetị bụ na ụlọ ọrụ gị ikuku na-achọpụta maka okwu ndị na-adịghị mkpa - na-adọta ndị ọbịa na-ezighi ezi na weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị. Google nwere mfe search dabeere na isiokwu ngwá ọrụ na nyochara gá »‹ na saá »‹ tá »‹ na-enye gá »‹ nzaghachi na Keywords na nkebi ahá »‹ rá »‹ okwu ahá »‹ a… a ezigbo mmalite iji há »if rá» if na á »‹ na-nri path zá.
Ka ị na-aga n'ihu nyochaa isi okwu gị na saịtị gị, Njikwa Nchọta Google na-enye akụkọ ihe mere eme nke okwu achọtara gị na ngwa ọchụchọ maka ya, yana usoro ndị nyocha na-apị na webụsaịtị gị.
Otú ọ dị, ọ bụ ihe ijuanya na ọ nweghị ngwá ọrụ Google tinyere atụmatụ niile ọnụ na ngwa ọrụ zuru oke maka ụlọ ọrụ iji nyochaa isiokwu, jiri ya tụnyere asọmpi ahụ, ma soro ọkwa kwa izu. Nke ahụ bụ ebe Semrush abata na foto a.
Semrush bá »an ihe incredibly siri ike toolset maka isiokwu na Search nyocha. Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke atụmatụ:
Chọpụta saịtị ndị na-asọmpi na isiokwu Google
Nweta ndepụta okwu Google maka saịtị ọ bụla
Nweta ndepụta nke isiokwu AdWords maka saịtị ọ bụla
Lelee ndị asọmpi gị ọdịda-ibe maka SE na AdWords okporo ụzọ
Nyochaa mkpụrụ okwu ọdụ ogologo maka ọdụ ọ bụla
Mee atụmatụ SE na AdWords okporo ụzọ maka ngalaba ọ bụla
Hụ mmefu saịtị maka AdWords
Nweta okwu nzuzo zoro ezo (na ọnụ ala) iji bulie mgbasa ozi AdWords gị
Chọta ndị nwere ike ịkpọsa ngwa ahịa maka saịtị ọ bụla
Chọta ndị nwere ike ire ahịa maka saịtị gị
Ma ugbu a na mwepụta nke Algọridim nke Google gbanwere iji hụ na nsonaazụ ọchụchọ mkpanaka naanị nwere ebe kachasị kachasị mma, Semrush amalitela nyocha nyocha mkpanaka!
Iji lelee ọbụbụenyi nke ịntanetị, gaa na Semrush Isi, ma tinye aha nrụọrụ weebụ. N'elu akụkọ ahụ, ị ​​ga-achọpụta onye ahọpụtara nke na-enye gị ohere ịgbanwe site na desktọọpụ data na data mkpanaka. Pịa akara ngosi kwesịrị ekwesị iji lelee mkpanaka nchịkọta data ma gosiputa visibiliti nke ngwa weebụ na ngwaọrụ mkpanaka.
Ngwaọrụ arụmọrụ na-egosi oke nke URL weebụsaịtị gị nke pụtara na SERPs nwere akara "mkpanaaka enyi," nye ndị na-enweghị ya.
Nchọpụta Arụ Ọrụ Na-egosi ọnụọgụgụ nke isiokwu mkpokọta weebụsaịtị na-agbado na Google kachasị elu 20 mobile organic na akwụ ụgwọ ọchụchọ ọchụchọ.
The Position Distribution chart na-egosi nkesa Keywords na weebụsaịtị bụ ogo maka Google kachasị elu 20 na nsonaazụ ọchụchọ.
A na-achịkọta nsonaazụ ndị ahụ enyi na enyi na mobile-enweghị omume enyi njirisi. Pụrụ ịhụ gị n'elu Keywords.
I nwekwara ike ile ndị kachasị asọmpi gị na ekwentị mkpanaaka.
Nwere ike ịhụ data yiri nke ahụ maka nsonaazụ ọchụchọ akwụ ụgwọ.
Iji hụ otu weebụsaịtị si abanye na nsonaazụ ọchụchọ ekwentị, gaa na Semrush Research Nnyocha ihe ọmụmụ → Ọnọdụ. Nkwupụta a depụtara isiokwu dị iche iche nke weebụsaịtị wepụtara na nsonaazụ ọchụchọ 20 kachasị na Google, yana ọnọdụ ngalaba maka nke ọ bụla.
URL na-akpọ enyi na enyi na nsonaazụ ọchụchọ ga-akara akara ekwentị mkpanaaka
Ọnụ ọgụgụ dị elu nke ibe weebụ na-enweghị akara ngosi a kwesịrị ịtụle dịka ịdọ aka ná ntị, n'ihi na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ike ịta ahụhụ. Iji zere ntaramahụhụ sitere na Google ma melite ahụmịhe ọchụchọ ndị na-ahụ maka ekwentị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ị kwesịrị ịkwalite ibe weebụ gị dịka omume omume enyi na-eme. Anyị na-akwado anabata web design.
N'ịchọpụta isiokwu ndị atụmanya gị na ndị ahịa gị na-eji iji chọta gị site na engines ọchụchọ dị oke mkpa maka ịga nke ọma gị. Mepụta saịtị weebụ mara mma, nke na-enye ihe ọmụma, na klas ụwa abaghị uru ma ọ bụrụ na enweghị ike ịchọta ya na ọchụchọ dị mkpa! My blog bụ n'ezie ezigbo ihe atụ… M toro saịtị ahụ ma na-aga n'ihu ịgbakwunye ọdịnaya ka achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ. Ugbu a, m nyochaa isiokwu n'usoro na-aga n'ihu!
Nsonaazụ bụ na enwetarala ọtụtụ trafịkị m dị mkpa site na nhazi usoro nchọta ihe ọmụmụ. Ọ bụrụ na m gburu nyocha isiokwu isiokwu 1,600 nke blọọgụ gara aga wee hụ na m jiri mkpụrụ okwu ndị ahụ rụọ ọrụ nke ọma, enweghị m obi abụọ na m ga-eduga mkpọ ahụ na ọtụtụ teknụzụ azụmaahịa.
Tags: desktọọpụ n'usorochọta ọkwaisiokwuisiokwu n'usoromobile ọchụchọ ọkwan'usoro site na isiokwusemrush
Jul 13, 2015 na 11:31 PM
ezigbo ihe omuma